I-Unpacking Game Apk Download Ye-Android [Igeyimu] - I-Luso Gamer
Ukuvula Igeyimu ye-apk Landa Ye-Android [Igeyimu]
Kunezinhlelo zokusebenza eziningi ezihlukene zemidlalo yokulingisa ezifinyelelekayo ukuze zilandwe ku-inthanethi. Nokho sigxile entshisakalweni yabadlali bamageyimu namuhla lapha silethe i-Unpacking Game Apk. Lapha ngaphakathi komdlalo wegeyimu, abadlali bangajabulela ukwenza izitayela zokupakisha eziningi.
Kusukela ekuqaleni kwempucuko yomuntu, ukupakisha kwakubhekwa njengenqubo enzima kakhulu. Ngoba uma ungekho kahle ekuphatheni izinto ngendlela. Khona-ke leyo miklamo engenasimilo ingase idle indawo eyengeziwe.
Okuthinta ekugcineni umthamo wokuthwala imithwalo. Ngakho-ke ukufunda leli khono elithile kudinga ukuzijwayeza okuningi empilweni yangempela. Ngakho-ke lapha silethe lolu hlelo lokusebenza olusha lokudlala olubizwa nge-Unpacking Game Android. Lapho abahlanganyeli banikezwe ithuba elilinganayo lokufunda leli khono eliyingqayizivele.
Kuyini Ukukhulula Igeyimu ye-Apk
I-Unpacking Game Apk wuhlelo lokusebenza lokudlala olususelwa ekulingiseni oluku-inthanethi olwakhiwe yi-Witch Beam. Yize inguqulo lapha esiyisekelayo imahhala futhi ayidingi ukubhalisa noma ukubhaliswa. Konke okudingwa ngabadlali bamageyimu ukulanda inguqulo yakamuva kusuka lapha.
Izwe eliku-inthanethi linothile ngezinhlelo zemidlalo ezahlukene. Ngisho nabadlali abaningi begeyimu be-android babonana ne-Google Play Isitolo ukuze balande imidlalo. Kodwa uma kuziwa ekufinyeleleni okuqondile ngaphandle kwemvume. Bese iningi likhetha imithombo yezinkampani zangaphandle.
Kodwa uma kucutshungulwa ukuhlolwa kwezinhlelo zokusebenza ezintsha zemidlalo, abathuthukisi bagcina beze nale nkundla entsha emangalisayo. Lapho abadlali bengajabulela ukufunda izindlela ezihlukene zokupakisha. Nakuba ngaphandle lapho eminye imidlalo ehlobene nokuhamba iyafinyeleleka.
Kodwa iningi laleyo midlalo efinyelelekayo ingase iphoqe abadlali ukuthi bathenge izinto ezihlukene. Lezo zingabiza kufika emakhulwini. Kodwa nakhu sesibuyile nalokhu okusha Umdlalo we-RPG lokho kumahhala ukudlala. Vele ufake inguqulo yakamuva ye-Unpacking Game Story futhi ujabulele lezimanga ezingapheli.
Igama Umdlalo Wokuvula
Usayizi 7.9 MB
Unjiniyela Umthakathi Beam
Igama lephakheji com.guide.unpacking.tips.app
Isigaba Imidlalo - Simulation
Ngesikhathi sidlala umdlalo wegeyimu sithole izingxenye ezahlukene ezithakazelisayo ngaphakathi. Lokho kuhlanganisa Ukuphumula Nokuya Phambili Okuqondile, Amaqhinga Okukhipha, Izingoma Zomsindo Eziphumuzayo kanye ne-HD Display njll. Okubaluleke kakhulu futhi okumangalisayo okungeziwe Izingoma Zomsindo Eziphumuzayo.
Iningi lezinhlelo zokusebenza zemidlalo ayinaso lesi sici ngenxa yokushoda kwentshisekelo. Ngisho nezinye izinhlelo zokusebenza zemidlalo zinganikeza izingoma eziningi ezidlala indima yokuphazamiseka. Lapho abadlali bengase bangakwazi ukugxila ezinhlosweni ngenxa yokuntula intshisekelo.
Ukwenza igeyimu ihehe futhi ihluke kakhulu, onjiniyela basebenze ngamaphikseli ayingcaca. Ukuthuthukisa amaphikseli ezithombe kuzosiza ekucwengiseni umuzwa wokudlala umdlalo. Khumbula ngenxa yokusetshenziswa kwamaphikseli e-HD, ingase inikeze isibonisi sangempela.
Ukusetshenziswa kwamaphikseli e-HD kwenza isibonisi sezinto sibe bushelelezi. Izikhwama, amaphakheji, amabhokisi, nemiklamo yamakamelo kwakugcinwa kuthuthukisiwe. Labo abazimisele ukuzuza futhi babambe izinto eziphezulu ngaphakathi kwezikhwama zabo. Kumele ufunde mayelana namaqhinga ahlukene.
Amanye amaqhinga abalulekile afaka phakathi ulwazi kuzokwabiwa lapha ngaphakathi kokudlala kwegeyimu. Ngakho-ke usukulungele ukwahlulela amakhono akho okupakisha. Bese sincoma ukuthi labo badlali bamageyimu balande futhi bafake inguqulo yakamuva ye-Unpacking Game Ukulanda Kwamahhala kwe-Android.
Uhlelo lokusebenza lokudlala limahhala ukudawuniloda.
Ukufaka igeyimu kunikeza lo muzwa wokulingisa we-HD.
Lapho abahlanganyeli bedinga ukufunda ngenqubo yokupakisha.
Izikhangiso ezivela eceleni zivunyelwe.
Kepha izovela ngaphezulu kwesikrini kuyaqabukela.
I-interface yomdlalo igcinwe ilula.
Amaphikseli e-HD asetshenziselwa ukuzizwisa okwangempela.
Ungalanda Kanjani Igeyimu Yokuvula I-Apk
Uma kuziwa ekulandeni inguqulo yakamuva yohlelo lokusebenza lokudlala. Abasebenzisi be-android bangathembela kuwebhusayithi yethu ngoba lapha kuwebhusayithi yethu sabelana kuphela ngezinhlelo zemidlalo eziyiqiniso nezangempela. Ukuqinisekisa ukuphepha nobumfihlo babadlali.
Siqashe ithimba lochwepheshe elakhiwe ochwepheshe abahlukahlukene. Ngaphandle uma ithimba liqinisekile mayelana nokusebenza kahle kwe-Apk. Asilokothi sinikeze uhlelo lokusebenza lokudlala ngaphakathi kwesigaba sokulanda. Ukufaka Ukulanda Kwegeyimu Ye-Unpacking sicela uchofoze isixhumanisi esinikezwe ngezansi.
Uhlelo lokusebenza lokudlala esilusekelayo lapha bekungelona elokuthi umnikazi walo. Lokhu kusho ukuthi ngeke sisekele ama-copyright ohlelo lokusebenza lokudlala. Ngakho-ke faka futhi ujabulele izici ezibalulekile zegeyimu ngokuzifaka wena engozini. Noma ngabe kukhona okungahambi kahle ngeke sibe necala ngalokho.
Lapha kuwebhusayithi yethu, sabelane ngezinhlelo zokusebenza ezihlukene zemidlalo yezokulingisa ezihlobene. Ukuze uhlole leyo midlalo ehlobene sicela uchofoze izixhumanisi ezinikeziwe. Labo banjalo Abashayeli bamaloli baseYurophu 3 Apk futhi I-Squid Royale Game Apk.
Ngakho-ke ufuna uhlelo lokudlala olungcono kakhulu lwe-HD olulula lokulingisa. Lokho kumahhala ukulanda futhi akudingi ukubhaliswa kokudlala. Bese sincoma ukuthi labo badlali bamageyimu balande futhi bafake i-Unpacking Game Apk.
Izigaba Simulation, Imidlalo Amathegi Umdlalo we-RPG, Ukuvula umdlalo we-Android, Ukuvula i-Game Apk, Ukukhipha Igeyimu Ukulanda, Ukuqaqa Indaba Yomdlalo Imeyili kwemikhumbi
I-Pinki Tunnel Apk Ukulanda Kwe-Android [VPN]
I-Sunny Game Apk Download Ye-Android [Ikhasino]